Satire Archives - Factcrescendo Myanmar | The Leading Fact Checking Website
Fact Check: ဒေါ်ကြူကြူလှကို ဩဇာအရှိဆုံးအမျိုးသမီးအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ခြင်း မရှိပါ
September 21, 2021 September 21, 2021 Zun ZeeLeaveaComment on Fact Check: ဒေါ်ကြူကြူလှကို ဩဇာအရှိဆုံးအမျိုးသမီးအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ခြင်း မရှိပါ
စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှာ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်က စစ်တပ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဩဇာအရှိဆုံးအမျိုးအသီးအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့တယ် ဆိုပြီးတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာမျှဝေလျက်ရှိပါတယ်။ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာရဲ့ မျက်နှာဖုံးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး ဟာသပြုလုပ်မျှနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ “မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဩဇာအာဏာအရှိဆုံးအမျိုးသမီးအဖြစ် ဒေါ်ကြူကြူလှကို မြန်မာ့အလင်း၊ ကြေးမုံသတင်းစာ များမှ ဖော်ပြ 17. 9. 2021”လို့ရေးသားပြီး “ဟားတော်မူ”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာက စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာရဲ့ မျက်နှာဖုံးအတူ အောက်ပါအတိုင်း မျှဝေထားပါတယ်။ အလားတူ ရေးသားမျှဝေထားတဲ့ ပို့စ်တွေကို ဒီနေရာ၊ဒီနေရာ၊ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာမှာလည်း တွေ့ရပါ တယ်။ မူရင်းလင်ခ့် – Fb link | Archive link အချက်အလက်စိစစ်ချက် စစ်တပ်ခန့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ […]
Fact Check: ကိုဗစ်ပျောက်ဖို့ ဘုန်ကြီးပြုတ်ရေလုပ်နေတာလား-မဟုတ်ပါ
September 9, 2021 September 9, 2021 Zun ZeeLeaveaComment on Fact Check: ကိုဗစ်ပျောက်ဖို့ ဘုန်ကြီးပြုတ်ရေလုပ်နေတာလား-မဟုတ်ပါ
မီးထိုးထားတဲ့ ဒယ်အိုးတစ်အိုးပေါ်မှာ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးထိုင်နေဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့အတူ ကိုဗစ်-၁၉ ပျောက်ဖို့အတွက် ဘုန်းကြီးပြုတ်ရည်သောက်ဖို့အတွက် ဘုန်းကြီးကို အတင်းဝိုင်းထမ်းခေါ်လာပြီး ဒယ်အိုးနဲ့ ပြုတ်နေပုံအဖြစ် ဖေ့စ်ဘွတ်မှာမျှဝေလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုမျှဝေမှုဟာ ဟာသသဘောဖြစ်သော်လည်း နားလည်မှုလွဲစေနိုင်တာတွေ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီဓာတ်ပုံဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်းက အင်တာနက်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့် ကိုဗစ်-၁၉နဲ့လည်း သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိတဲ့ ပို့စ်မှာ “မိုက်ရိုင်းလိုက်ကြတဲ့ တောသားတွေကွာ…😡 ဘယ်ကောင်မြှောက်ပေးလိုက်လည်းမသိဘူး ကိုဗစ်ပျောက်ချင်ရင် ဘုန်းကြီးပြုတ်သောက်ရတယ်ဆိုပီး….သူဟာသူ နေမကောင်းလို့လှဲနေတဲ့ ရွာဦးကျောင်းက ဆရာတော်ကို အတင်းဝိုင်းထမ်းခေါ်လာပီး လူပုံအလယ် မိုးပြဲဒယ်ထဲထည့်ပြုတ်နေကြတာ… ဆရာတော်ခမျာ လက်အုပ်ခလေးချီပီးတောင်းပန်ရှာပါသေးတယ်… ဒါပေမယ့် တောသားတွေက မရတော့ဘူး ကိုဗစ်ပျောက် ချင်တယ်..ဘုန်းကြီးပြုတ်သောက်မယ်ဆိုတာချည်းဘဲ…😡😡”စသည်ဖြင့် ရေးသားပြီး “Mee Nge”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူက မျှဝေထားတာ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါတယ်။ မူရင်းလင်ခ့် – Fb link | Archive link […]